India dia manao fitsapana COVID-19, voatery ny quarantine ho an'ny Brits rehetra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » India dia manao fitsapana COVID-19, voatery ny quarantine ho an'ny Brits rehetra
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Ny fepetra vaovao dia toa nampidirina ho setrin'ny fepetra mitovy amin'izany apetraka amin'ny teratany karana an'ny Fanjakana Mitambatra.
Nantsoin'i India ho “fanavakavahana” ny fanapahan-kevitr'i Grande-Bretagne tsy hanaiky ny vaksinin'ny AstraZeneca an'ny indianina, fantatra amin'ny anarana hoe Covishield.
Ireo teratany anglisy vita vaksiny tonga any India dia hiharan'ny quarantine mandatory 10 andro.
Manomboka amin'ny Alatsinainy, ny tonga rehetra any Angletera dia tsy maintsy mampiseho fanandramana ratsy COVID-19 natao 72 ora farafahakeliny alohan'ny niaingany.
Raha ny fahitana azy dia nanambara ny tompon'andraikitra ao amin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny India fa ny teratany anglisy rehetra, anisan'izany ireo vita vaksiny tanteraka, dia hiharan'ny quarantine mandatory mandritra ny 10 andro rehefa tonga any India izy ireo.
Ny fepetra vaovao dia toa nampidirina ho valin'ny mitovy fepetra napetraka amin'ny teratany karana an'ny UK.
Ny fanambarana politika vaovao dia tonga taorian'ny filazan'ny sekretera ny raharaham-bahiny India Harsh Vardhan Shringla ny fanapahan-kevitr'i Angletera tsy hanaiky ny kinovan'ny Indiana. AstraZeneca vaksinina, fantatra amin'ny anarana hoe Covishield, "fanavakavahana".
Nampitandrina ny minisitra ny amin'ny fepetra mifandimby raha tsy mandinika indray i Londres.
Manomboka amin'ny Alatsinainy, ny fahatongavan'ireo Anglisy rehetra - na inona na inona satan'ny vaksiny dia tsy maintsy mampiseho fanandramana ratsy COVID-19 natao 72 ora farafahakeliny alohan'ny fiaingany, hiatrika fitsapana faharoa amin'ny fahatongavany ary valo andro fahatelo aty aoriana.
Hamafisina mandritra ny 10 andro koa ny fotoana tokony hipetrahana mandritra ny quarantine, hoy ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny.
Ny governemanta britanika dia nanambara tamin'ny volana lasa teo fa hamela ireo mpandeha vita vaksiny tanteraka handingana ny quarantine ary hanao fitsapana vitsy kokoa, saingy vaksiny ihany no ekena teo ambanin'ny programa amerikanina, anglisy na eoropeanina na ireo nomen'ny sampana fahasalamana ekena.
Firenena am-polony mahery any Azia, Karaiba ary Moyen Orient no tafiditra tao anatin'io lisitra io, saingy IndiaNy programa dia tsy tafiditra. Ary koa, tsy nisy fandaharana afrikanina nekena.
Ny ankamaroan'ny karana dia vita vaksiny vita tamin'ny karana AstraZeneca tifitra, izay novokarin'ny Serum Institute of India. Ny sasany kosa nahazo COVAXIN, vaksinim-pamokarana novokarin'ny orinasa indiana iray izay tsy ampiasaina any Angletera.
Ny fandavanan'i Britain tsy handray mari-pankasitrahana vaksinina sasany dia nanjary ahiahy fa mety hampitombo ny fisalasalana amin'ny vaksinina.
Ireo firenena izay nahazo fatra an'arivony an'arivony tamin'ny vaksinin'ny AstraZeneca avy amin'ny governemanta britanika dia tavela nanontany tena hoe maninona no tsy dia tsara teo imason'ny mpanome azy ny fandaharan'asan'ny vaksinin'izy ireo.